खजाना खोलेजस्तो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
यस शृंखलाका बाँकी भागमा र यही भागको अर्को संस्करणमा चाहिँ मलाई एउटा ठूलो पेजमा छापिएको नेपालको नक्सा पनि पढ्न मन लागेको छ जहाँ डा. श्रेष्ठले हिँडेको पैदल बाटो, त्यो बाटो हिँडेको साल, त्यो बाटो हिँड्न लागेको समय आदि कोरिएका होऊन् । त्यो नक्सा हेरेर उनले हिँडेको बाटो हिँड्न नसके पनि उनको किताब पढ्दै गर्दा आफू पनि त्यही बाटो हिँडेको सुखद कल्पना त गर्न सक्छु नि ! प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ १०:५३
'दिउँसोको समयमा त जस्ता तातेर असाध्यै गर्मी हुन्छ, बालबालिकामा पढ्ने जाँगरै हराउँछ, त्यही भएर अलि चाँडै बिदा गर्छौं,' विद्यालयका प्रधानाध्यापक उर्वादत्त मिश्राले भने, 'पुरानो भवनमा पनि जस्ताकै छानो थियो, त्यसमा पनि गर्मी निकै बढी हुन्थ्यो ।' महाकाली पुल आयोजनाबाट प्राप्त मुआब्जाले अर्काे भवन निर्माण भइरहेको उनले बताए । उक्त भवनमा जस्ताको छानो नहाली ढलान गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।